Andriantany – Iarinarivo : nirefodrefotra ny basy, olona iray maty voatifitry ny jiolahy | NewsMada
Andriantany – Iarinarivo : nirefodrefotra ny basy, olona iray maty voatifitry ny jiolahy
Jiolahy manodidina ny 12 eo ho eo nirongo basy Kalachnikov sy PA no indray nirodorodo nanafika tao amin’ny fokontany Tsarazaza Andriantany, kaominina Iarinarivo, distrikan’Ambohidratrimo, ny alatsinainy alina tamin’ny 10 ora sy 30 mn. Tovolahy iray maty notifirin’ireo jiolahy…
Nihorohoro tanteraka ireo mponina eo an-tanàna nandritra ity fanafihan-jiolahy mitam-piadiana mahery vaika ity. Tokantrano miisa dimy indray nasesin’ireo olon-dratsy tamin’io alina io. Tsy nahazo izay notadiavina anefa ry zalahy tamin’io fotoana io, afa-tsy finday sy entana azo nobataina tao an-trano. Vola no tena notadiaviny saingy niala maina izy ireo rehefa nilaza ireo niharam-boina fa tsy manam-bola mihitsy izy ireo. “Niditra an-keriny tato an-trano ireo olon-dratsy tamin’io fotoana io. Ny sasany niandry teny ivelan’ny trano, ny hafa kosa nanakorontana nitady vola. Tao ambany rihana no niditra mialoha ry zalahy vao niakatra tao ambony rihana sady nidaroka ihany”, hoy ny fitantaran’ny iray amin’ireo fianakaviana niharam-boina. Misy trano lehibe iray miorina eo akaikin’ilay trano notafihin’ireo jiolahy. Nihevitra ireo olon-dratsy fa ireto fianakaviana notafihin’izy ireo ireto no tompon’ilay trano lehibe vao amboarina mifanila amin’ilay trano voatafika. “Aiza ny vola nanaovanareo ity trano ity?”, hoy ireo jiolahy, araka ny tatitra nampitain’ireo fianakaviana hatrany. Tapitra nosavain’izy ireo avokoa ny tao an-trano rehetra, nisy kosa ireo nanambana basy ireo olona tao an-trano mba tsy hihetsika mahery.
Taitra ilay tovolahy niharam-boina satria marary ao amin’ilay trano notafihin’ireo jiolahy ny reniny ka nihevitra izy fa mihetsika ny aretin’io reniny io. Ny rahalahiny sy ny vadiny kosa, mipetraka ao ambany rihana izay nidiran’ireo jiolahy an-keriny. Namonjy tao an-trano ilay tovolahy niharam-boina izay tsy nanampo na inona na inona, kanjo notifirin’ireo jiolahy ka voa teo amin’ny sorony havanana. Nianjera avy hatrany ka tapaka ihany koa ny tanany.
Diso lalana ireo jiolahy…
Rehefa tsy nahita izay vola notadiaviny ireo jiolahy, nifindra tamin’ny trano tsy lavitra ilay voatafika niaraka tamin’ny rahalahin’ilay voatifitra (nataon’izy ireo takalonaina). Toy ny nataon’izy ireo tao amin’ilay trano notafihiny ihany koa ny paikady nentin’izy ireo nanafika tao amin’ilay tokantrano iray hafa. Nitady vola ihany koa, saingy nilaza koa ny tompon-trano fa tsy manambola homena azy ireo. Tezitra ry zalahy ka nentin’izy ireo ny telefaonina finday an’ny tompon-trano. “Niady hevitra teo izy ireo ary niaiky fa diso lalana fa tsy tokony ho tato aminay no nanafika”, hoy ireo tompon-trano. Mbola nanohy ny asa ratsiny tany amin’ny trano hafa indray ry zalahy taorian’izay sady nanapoaka basy. Tsy fantatra anefa na lany bala ry zalahy fa tsy nanaiky lembenana ny tompon-trano fa nanohitra ireo olon-dratsy ary naratra vokatr’izany ny roa lahy tamin’ireo mpanafika. Nifanenjehan’ny fokonolona koa ry zalahy, saingy tafaporitsaka.
Fokontany sivy ny mandrafitra ny kaominina Iharinarivo. Kamboty lavitra ny mpitondra fanjakana anefa izy ireo satria tsy misy jiro ny tanàna, na “poste avancé” an’ny zandary sy “poste de police” aza tsy misy, hany ka mitaintaina andro aman’alina ny mponina amin’ny afitsoky ny jiolahy. Tsy misy mpitondra fanjakana mijery mihitsy ity kaominina ity nefa andalovan’ny tetikasan’ny filoham-pirenena. Miantoka ny tsenan’ny tantsaha eny Talatamayy ny vokatra miainga avy ao amin’ny kaominina. Miraviravy tanana, noho izany, ny mponina, tsy lazaina intsony ny haratsian’ny lalana. Aiza ilay “gouvernement de combat” manoloana ity tsy fandriampahalemana miseholany isan’andro ity ? Na an-drenivohitra izany na ambanivohitra. Maninona no asiana tombo sy hala toy izany ny eny anivon’ireny kaominina ireny ka tsy jerena mihitsy ny hafa? Miandry fampielezan-kevitra amin’ny 2018 vao hievotrevotra amin’ny alalan’ny fampandriana adrisa any amin’ireny toerana lavitra andriana ireny? Hita tampoka daholo ireo elakela-trano rehetra, saingy mivadika ny rasa rehefa tonga eo amin’ny fitondrana.